China Industrial Gelatin ụlọ ọrụ na-emepụta | Yasin
Gịnị bụ teknuzu gelatin / hide mama?
Industrial Technical Gelatin bụ protein sitere na hydrolysis nke collagen nke bụ protein mejupụtara nke anụmanụ anụ, collagen anụ ahụ. Ọ bụ obere granulu na-acha odo odo, ezigbo ntanye granular nke dị mfe igbari na mmiri. Akụrụngwa ejiri mee ihe maka imepụta anụ sitere na anụ anụ ma ọ bụ ọkpụkpụ. A na-ejikarị Gelatin na-arụ ọrụ iji mee agba bọọlụ, nri fodder, akwụkwọ abrasive dị mma nke gauze, akwa na-egbu maramara, mama ojii, mbukota roba, kaadị nrapado aka, arịa ụlọ osisi, akara akara data, ọkụ na akpụkpọ anụ, nwere ike ịchacha na ịcha akwa, na-agbaze na plating. mmiri mmiri, na-eme gel gel. Ya viscosity dị ezigbo mkpa, ọbụnadị na-eme dị ka oke oke.
Jelii Ike Oge ntoju 50-250Bomom
Viscosity (6.67% 60 Celsius） Nkechi 2,5-5,5
Oke Uche mg / n'arọ .50
Chart Chart Maka Industrial Gelatin
• Ngwaọrụ GELATIN bụ odo edo edo, aja aja ma ọ bụ aja aja aja gbara ọchịchịrị, nke nwere ike ịgafe sieve oghere 4mm.
• Ọ bụ translucent, kenkuwa (mgbe akọrọ), fọrọ nke nta ka uto siri ike, na-ewepụtara collagen n'ime ụmụ anụmanụ ”akpụkpọ na ọkpụkpụ.
• Ọ bụ ihe dị mkpa kemịkalụ kemịkalụ. A na-ejikarị ya dị ka onye na-afụ ụfụ.
• Dabere na ọnụ ọgụgụ na-ezughị ezu, gelatin na-emepụta ngwa ngwa dị iche iche n'ihi arụmọrụ ya, na ihe karịrị ụlọ ọrụ 40, a na-etinye ihe karịrị ụdị 1000 ụdị.
• Ọ na ọtụtụ-eji nrapado, jelii gluu, egwuregwu, paintball, plating mmiri mmiri, sere, sandpaper, ịchọ mma, osisi nyagide, akwụkwọ nyagide, dikpọ oku na silk ihuenyo gị n'ụlọnga, wdg
A na-eji gelatin eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa niile dị ka ihe nkedo maka ngwakọta mgbagwoju anya nke kemịkalụ iji mepụta isi egwuregwu. Njirimara ọrụ nke gelatin dị mkpa ebe ọ bụ na njirimara ụfụfụ nke isi egwuregwu ahụ na-emetụta arụmọrụ nke egwuregwu ahụ na mgbanye
A na-eji gelatin eme ihe maka ikpochapu ala na akwụkwọ mkpuchi. Ma ọ bụ naanị ejiri ya mee ihe ma ọ bụ jiri ihe ndị ọzọ na-agbakwunye, mkpuchi gelatin na-emepụta ebe dị mma site na ijuputa obere ntụpọ ndị dị na ya ma hụ na mmegharị mbipụta dị mma. Ihe atụ gụnyere akwụkwọ mmado, kaadị egwuregwu, akwụkwọ ahụaja, na ibe akwụkwọ na-egbu maramara.
A na-eji Gelatin dị ka ihe nrachi n’agbata ihe mpempe akwụkwọ na akwụkwọ abrasive nke sandpaper. N'oge rụpụta akwụkwọ nkwado mbụ na-ntekwasa na ndọpụ gelatin ngwọta wee dusted na abrasive grit nke chọrọ urughuru size. Abrasive wiil, diski na eriri na-N'otu aka ahụ kwadebere. Ikwusi ekwenti na usoro ijikọ obe na-emecha usoro ahụ.
Kemgbe iri afọ ole na ole gara aga, ejirila ọtụtụ ụdị sịntetik dochie anya mado osisi ndị e ji gelatin mee. Na nso nso a, enwere ike ibụpụta ihe nile sitere na gelatin nrapado. Taa, gelatin bụ nrapado nke nhọrọ dị na akwụkwọ ekwentị na ejiri akara katọn.
25kgs / akpa, otu poli akpa n'ime, kpara / kraft akpa elu.
1) Na pallet: 12 metric tọn / 20 ụkwụ akpa, 24 metric tọn / 40 ụkwụ akpa
2) enweghị pallet:
maka ntaneti 8-15, 17 metric tọn / 20 ụkwụ akpa, 24 metric tọn / 40 ụkwụ akpa
Karịa 20 ntupu, 20 metric tọn / 20 ụkwụ akpa, 24 metric tọn / 40 ụkwụ akpa
Nchekwa na nkwakọba ihe: Na-achịkwa oke iru mmiri n'ime 45% -65%, ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime 10-20 ℃
Ibu ke akpa: Nọgidenụ na a tightly mechiri emechi akpa, echekwara na jụụ, akọrọ, ventilated ebe.